Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » New Drone nwere ike ibuli kilogram 200 wee fegharịa kilomita 40
Ị nwere nkọwa ndị ọzọ ị ga -agbakwunye na ntọhapụ a?
Ị nwere ozi ndị ọzọ, foto, vidiyo ma ọ bụ njikọ bara uru?
Pịa ebe a iji nweta nkwupụta mgbasa ozi a ma nweta ọhụhụ karịa.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara otu esi ebipụta mwepụta n'ọdịnihu, gaa na www.travelnewsgroup.com/visibility
Igwe ọkụ eletrik dị arọ nke Volocopter VoloDrone duziri ụgbọ elu ọha nke mbụ taa na ITS World Congress 2021. Ya na onye ndu lọjistikị mba ofesi DB Schenker, Volocopter, onye ọsụ ụzọ nke ikuku ikuku mepere emepe (UAM), gosipụtara njikọta enweghị nkebi nke VoloDrone n'ime eriri ọkọnọ lọjistik na ngwongwo njedebe na njedebe. ngosi njem. Ndị mmekọ ahụ gosipụtara nnukwu ọganihu ha ọnụ kemgbe DB Schenker ghọrọ onye na -etinye ego na Volocopter na mbido 2020.
A kwadebere VoloDrones iburu ibu ruru kilogram 200. Nke a na-eme ka ha dabara maka ọrụ dị iche iche dị oke mkpa yana ọ dịkwa mma n'ezie.
VoloDrones na -aga ebe dị anya. Site na oke ruru kilomita 40, ha nwere ike rụọ ọrụ n'ime nnukwu okirikiri site na mbuli ha. Ejikọtara ya na nnukwu ụgwọ a na -emepe nnukwu ohere.
Ọkụ eletrik zuru oke
Dịka taksi ụgbọ elu VoloCity anyị, VoloDrone na -arụ ọrụ 100% ọkụ eletrik wee na -efe efe na -enweghị ikuku. Dị ọcha na ịdị jụụ - ọ bụ ụzọ njem zuru oke.